Mul'annoo Qabiyyee Jijjiiri
Mul’ata hundataaf mul’ata baratamoo giduu jiru jijjiira yoo galmeen hundataa banaa tahe.
korkoddii <-> Barruu
Yaadachiisaa gara qubannoo qaree ammaatti qindeessaaf iddoo kana cuqaasi. Hammaa yaadachiisawwan shanitti qindeessuu ni dandeessa. Gara qindeessaatti utaaluuf, sajoo Naanna'iinsaa cuqaasitii, foddaa Naanna'iinsaa sajoo Reminder keessa cuqaasitii kana booda, qabduu Duraani yk Itti aanee cuqaasi.
Sanduuqa tarree banaa/dhamaa
Mataduree fi barruu isa faana wal qabatan ariitiidhaan galmee kee keessatti tartiibessuuf, tarree keessaa akaakuu "Mataduree" fili, kana booda sajoo Mul'annoo Qabiyyee cuqaasi. Amma qabeentota tartiibessuudhaaf harkiftee kaa'uu ni dandeessa.
Akka Geessituutti Saagi
Yammuu galmee ammaa keessatti maalimaa harkistee keesu, geessituu siif uuma. Gara maalimaa akeeki geessituutti utaaluuf, geessituu galmee keessaa irra cuqaasi.
Galmee ammaa keessatti iddoo akka geessituutti harkistee keesuuf maalimaa filataame saaga. Barruun akka kutaalee hayyisatti saagameera. Maddi yammuu jijjiamu, qabeentootii geessituu ofumaan haaromu. Geessituu galmee keessa hujeekaan haaromsuf, Meeshaale - Haaromsi - Geessitootafiladhu. Saxaatoof, miseensota OLE, wabiif kasooleef; geessituu uumuu hindandeesu.
Akka Garagalchaatti Saagi
Galmee ammaa keessatti iddoo akka geessituutti harkistee keesuuf maalimaa filataame siif garagalcha. Saxaatoof, miseensota OLE, wabiif kasooleef; harkistee ka'uu hindandeesu.
Maqaalee galmeewwan barruu banamanii mara tarreesa. Qabeentaa galmee foddaa Nanna'aa keessaa mulisuuf, maqaa galmee tarree keessaa filadhu. Nanna'aa keessatti galmeen ammaa agarsiifame kun tarree keessaa maqaasaa booda jecha "ka'aa" jedhuun agarsiisama.
Akkasuumas wanta Nanna'aa keessaa mirga cuqaasuun Agarsiisi filadhuutii, kana booda galmee akka agarsiisaamu barbaaddu irra cuqaasi.
Title is: Naanna'aa